Juventus oo wada qaadaneysa Andres Iniesta, Leon Goretzka iyo Emre Can
Friday, July 20th, 2018 - 00:01:45
Monday September 04, 2017 - 09:40:46 in Wararka by Kubad Bile
Juventus ayaa durba bilowday qorshe ay kusoo xero gelineyso xiddgaha beeca xorta ah noqonaya dhamaadka xilli ciyaareedka 2017-18 ee kala ah Andres Iniesta, Leon Goretzka iyo Emre Can, sida ay warineyso Tuttosport.
Sida laga soo xigtay jariirada saldhigeedu yahay magaalada Torino, Juventus ayaa quudaraneysa heshiisyada cajiibka noqon doona haddii ay gacanta kusoo dhigto.
Baahida ay u qabaan xiddiga heerka caalami, Can maaha mid qarsoodi ah waxuuna kooxda Livepool ka diiday inuu heshiis cusub u saxiixo , waxuuna si farsamaysan heshiiska shaqsiga ula gaari karaa koox kale marka la gaaro 1- Febraayo 2018.
Iniesta ayaa isna horey loo magac dhabay, waxuu u egyahay qaabkii markii Pirlo ka tagaya Milan oo kale , waxuuna fursad ka halay Juventus taasoo Iniesta u noqon karta mid taa la mid ah.
Barcelona oo jahwareed iyo niyad kala kulantay suuqa kala iibsiga sanadkan ayaa weyn karta Iniesta marka la gaaro June 2018 maadaama qandaraaskisu dhacayo.
22 jirkan daafaca uga kooxda Schalke , Goretzka, ayaa la sheegay inuu horeyba heshiis ula gaaray kooxda Bayer Munich, waxeyse Juve awoodaa in ay loolan u gasho iyadoo la imaaneyso qorshe ay ku qancineysa laacibkan.
Haddii uu kusoo biiro Juventus Goretzka, waxuu dib ula midoobayaa Benedikt Howedes, kaasoo Juve kusoo biiray maalinti u dambeysay suuqa kala iibisga .